Email ईमेल अप्टिमाइजेसन इशाराहरू बढाउन खोल्दछ र क्लिकहरू | Martech Zone
यो ContentLEAD बाट यो इन्फोग्राफिक भन्दा धेरै सजिलो हुँदैन। प्रति लीड कम र उच्च रूपान्तरण दरको कारण सम्भावनाहरू ईमेलको साथ आउँदछन्। तर त्यसले एक विशाल समस्या गर्दछ ... तपाईंको ईनबक्समा सयौं वा हजारौं अन्य पुश मार्केटिंग सन्देशहरू मध्ये हराउँदछ।
भीडबाट तपाईंको ईमेल संचार फरक गर्न तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ? यहाँ ईमेल तत्वको एनाटॉमी भित्र elements तत्वहरू छन् साथ साथै प्रभाव अनुकूलन हुन सक्छ:
Succinct विषय लाइनहरु नेतृत्व गर्न सक्छ २०% बढी खुला दरहरू औसत मा।
निजीकृत बधाई नेतृत्व गर्न सक्छ १२%% उच्च क्लिक-थ्रू दरहरू.
गैर-कर्पोरेट स्पिक नेतृत्व गर्न सक्छ २%% थप क्लिकहरू.
छविहरू थप्नुहोस् लागि %२% ध्यान बढ्यो.
खण्डमा सन्देशहरू र दर्शकहरूको नेतृत्व २%% थप क्लिकहरू.
किनकि ईमेल अभियानहरू यति प्रभावकारी छन्, लगभग सबै ब्रान्डले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दछ। सम्भाव्य इनबक्सहरू कम्पनीहरूको ईमेलको साथमा भरिएका छन् र तपाईंको ग्राहकहरूले स्प्यामबाट मूल्यवान सन्देशहरू क्रमबद्ध गर्नुपर्दछ। यो इन्फोग्राफिकले तपाईंलाई एक सफल ईमेल सन्देशको एनाटॉमीमा छिटो हेराई प्रदान गर्दछ ताकि तपाईं आफ्नो श्रोताहरूसँग साझेदारी गर्ने सामग्रीमा सबैभन्दा सफल अभ्यासहरू ल्याउन सक्नुहुनेछ। सामग्री नेतृत्व
टैग: कर्पोरेट बोल्नुहोस्दर मार्फत ईमेल क्लिक गर्नुहोस्ईमेल क्लिक थ्रु रेटईमेल क्लिकहरूईमेल छविहरूईमेल खुला दरईमेल खुल्छईमेल अनुकूलनईमेल विभाजनईमेल विषय लाइनहरुमानवीय बोलीनिजी अभिवादन